Maitiro ekugadzirisa iyo "lag" mushure mekumisikidzwa kweIOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo "lag" mushure mekuisa iOS 9
Iko hakuna vashoma vashandisi vari kunyunyuta nezve madiki majee madiki kana lag kunyanya mune zvine hukama neiyo SpringBoard, senge kutsvedza kweControl Center, kuwana iyo Notification Center kana kuenda kuSpotlight, kunyanya mune ino yekupedzisira basa ndipo apo vashandisi vari kuwana zvipingamupinyi zvakanyanya, zvinoita sekunge iyo yekuvandudza kuburikidza neOTA kuenda kuIOS 9 kubva kumashanduro apfuura eIOS Iri kuunza mutsetse uye kune mazana ezvichemo, zvisinei, zvinoita sekunge mhinduro yacho iri nyore, kupfuura zvataigona kufungidzira, ruzivo urwo vashoma vaizoona uye muActualidad iPhone isu tichakuudza nezvazvo.
MuIOS inogadziridza yakakura sekuchinja kubva kuIOS 8 kuenda kuIOS 9, ini ndinogara ndichikurudzira kudzoreredza chishandiso kuti chizobatanidza backup, kana zvirinani kudzoreredza mudziyo kune yazvino vhezheni yeIOS uye iseta iyo se iPhone nyowaniIzvo hazvitore zvinopfuura chinguva uye zvinongova kamwe chete pagore, izvo zvinogona kuwedzera zvakanyanya mashandiro echigadzirwa chako.
Chekutanga pane zvese ticha tarisa uine chokwadi chikuru chatinacho kana kuti kwete iyo lag isingafadzi, Kuti titarise, isu tinofanirwa kuyedza iwo maficha mune zvese, tichifambisa Notification Center, iyo Center Center uye kupinda muSpotlight kuburikidza neswipe, mashoma macheki kuti tione kana paine diki jeki rinotirova. Kana iwe wakambotambura neaya majeki kare uye iwe uchifunga kuti haufanire kuiongorora, enda mberi nematanho aya:
Hatitungamire ku «Zvirongwa«
Pane imwe nguva muzvirongwa, tinoenda ku «General»Uye«Accessibility«
Kutanga tinopinda «Wedzera kusiyana«, Kugonesa iyo« mutyairiDeredza kujekesa»Uye« Rima mavara ».
Pasina kusiya Zvirongwa, tinodzokera ku «Deredza kufamba»Uye isu tinomutsawo.
Iye zvino ndipo patinodzvanya bhatani rekuti «kumba» kuti tidzokere kuSpringBoard uye kana tangovhara tinoshandisa zvese zvinoshandiswa mu multitask (nekudzvanya kaviri pamba).
Isu tinoitazve cheki chekare cheControl Center, uye Notification Center.
Tinotendeukira zvakare ku «Zvirongwa»Uye isu tinoita nhanho 3 ne4 tichidzosera kumashure, isu tinoregedza idzi sarudzo zvakare kuti tisiye sepakutanga.
Kune vazhinji vashandisi veforamu dzakasiyana avo vari kuzivisa izvo iyi nzira iri kuvashandira, uye nevamwe vazhinji vasingawani mutsauko. Zvisinei, ndinotora mukana wekutenda mumwe wangu Artjom Olegovick ndiani arova kiyi kuburikidza nemaforamu e 9to5mac uye mamwe manyuko akavimbika, uye ini ndinokurudzira kune avo vane matambudziko nekambori kadiki kuti vaite matanho aya, hazvibhadhare chinhu uye iwe unogona kudzivirira aya madiki matambudziko.
Pasina mubvunzo haina chikonzero chemakomputa, zvinoita sekunge iri diki lag inokonzereswa neimwe nzira inomanikidzwa muChitubuBhoard kana zvimwe zvakafanana. Kana ikakushandira, inzwa wakasununguka kutitaurira mubhokisi remashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa iyo "lag" mushure mekuisa iOS 9
David BS akadaro
Ichokwadi, ini ndinosarudza kumirira makomendi, kana ikashandira mumwe munhu, sezvo ini ndakagadzirisa iyo mini mini uye ndakave nedambudziko iro uye kunze kwekusara kana ndichinyora mune chero chishandiso, mhinduro yangu? Dzokera kuIOS 8.4.1
Pindura kuna David BS
Ini ndichakuudza: Mushure mekuvandudza ipad yangu yaigona kuturika yega yega nhatu uye ndaifanira kuidzima uye kuenderera. Mirira zvitsva uye zvaive zvakadaro. Zvakaitika kwandiri kuti nditsvage paGoogle ndichishandisa izwi rekuti lag uye ¡Milagro! chinyorwa chako chakaonekwa. Ndakaita zvese zvauratidze uye kugadzirisa dambudziko Miriyoni yekutenda. Ndakanga ndisati ndambonyora mu blogspot, asi kuonga kwangu kwakakura uye zvakangonaka chete kukutendai. Kumbundira.
Iri sei iOS 9 pane iyo iPad 3? Pane chero munhu akaiisa?
Zvinoenda zvakashata, asi muIOS 9.1 zviri nani kwazvo, ndiri kuyedza beta uye ndoona kuti yakanyatsogadzikana uye inonamira kupfuura vhezheni yepamutemo yeIOS 9.
Pindura kuna Nimus
Zvakanaka, ndakaita hunyengeri hwekubvisa lag pane yangu iPad 3 uye yakandishandira, sezvo ini ndaive neiya lag.
Ini ndiri mukukahadzika kumwechete naXavi. Chero ani anogona kutipa mhinduro?
Pindura kuna alvarojrh
Ndakaiisa pane IPad 2 uye inoenda neine lag shoma, hapana chinotyisa. Kwaziwai!
Ini ndakaisa iyo iOS 9 kubva pakutanga pane yangu iPhone 6 plus uye ikozvino yakanyorova uye isina majee.
Ini ndinokurudzira kune avo vane iPhone 5S / iPhone 5 kuti vaise iOS 8.4.1 kubva pakutanga nekuti iOS 9 yakasarudzika, ini ndinokurudzira kumirira kusvika vhezheni 9.1
Asi iwe unoti unopenga chii ????
Zvakanaka, muma5s ndiri kuita zvirinani kupfuura nakare uye bhatiri rinogara kwenguva refu.
Iphone 5S yakagadziridzwa kuIOS 9 mushure me8.2, uye kana yanga ichirova, hapana chinotyisa.
Ini ndaita nhanho dzakatsanangurwa muchinyorwa uye zvinoita kunge zvichashanda, isu tichafanirwa kumirira iro rese zuva, kuitira kana, asi hei, icho chinhu icho Apple ichagadzirisa hongu kana hongu muna 9.0.1.
Asi iwe unoti unopenga chii ???
Izvi zvaisaenda pano.
Zvakanaka, kana iwe ukangoshandisa sarudzo yekudzikisa kujekesa, lag inonyangarika kuyedzwa muiyo iPhone 6 Plus asi izvi zvinoita kuti ibvise hunhu hwekuona, (kujeka kwezviziviso kana nzvimbo yekudzora inonyangarika, inobuda yakasviba chose) funga kuti chishandiso chiri kuzokundika nekuda kwekuita nyaya nekuti kana ukadzora kudzikisa kuve pachena marara anodzoka ndiri kufunga zvakanyanya kudzokera kuiyos 8.4 kwaziso.
Ehe, kubva pandakagadzirisa, ndakaunzwa neiyi LAG.
Ndiri kuzoita zvavanotaura, ona kuti zvinofamba sei
Kwete, hazvishande. Ndakaita sezvavanotaura uye majee anogara achienderera
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri, kunyangwe kudzoreredza kubva pakutanga uye pasina kuisa backup, nzira iyo "lag" yakagadziriswa yaive "kudzorera zvese zvigadziriso" kubva kumagadzirirwo
Iwe unoreva here "kugadzirisa patsva" kana "kujekesa zvirimo uye marongero" uye kudzorerazve zvese?
Dambudziko, kunyangwe iwe usina kutenda kuti ndiyo yakashata RAM ndangariro! 1Gb !!! hazvina kukwana kunyangwe apuro yakadii inosimbirira kuti hongu ... ini ndine iOS9 pane iphone 6 Plus uye iyo iPad mweya 2 ine 2Gb yeRam uye mutsauko uripakashata !!! Iwe uchaona kuti iOS9 inomhanya sei pane iphone 6s zvakare ine 2Gb yeRam ... Ndiro dambudziko rakanyanya! izvi zvinokambaira zvakadii kubva kuApple izvo zvine tekinoroji yakakwana yekuisa kubva ku iPhone 5 2 Gb yeRam ivo vasina kuzviisa kusvikira zvino, zvichiita kuti iPhone 6 inyanye kubatwa nekuva chishandiso chitsva uye chazvino chisingachashandi! !!
iOS 9 inokiya iPads uye iPhones marara
Zvinosuruvarisa kuti iwe unofanirwa kuita izvo kuti mudziyo uende nekukurumidza. Iroro idambudziko neshanduro x.0, saka isu tinofanirwa kumirira iyo inotevera iyo inokwenenzvera mumbug nekuchengeteka kwakazara.
Iwe waifanira kuzvipa nguva.
LUCK uye kushivirira.
Zvinoshamisa zvinoshanda pa ipad mini 3 😀
Ini ndinayo pane iyo iPad 2 uye yakafanana neiyo iOS 8.4.1
Ini ndakaita nhanho idzi ndisina kumboiverenga chero kupi kumberi uye diki lag mune multitasking inotsvedza uye pakuvhura nekuvhara mafomu kwakagadziriswa.
Ndiko kuti kana whatsapp iri iphone 5 yakavharwa zvachose inotora zvinopfuura 2sg kubva pakuenda kubva kublack screen kuratidza iko kushanda
Ndakagadzirisa ipad 3 uye iPhone 5, kana iri ipad 3 ini handikurudziri zvachose, inokurudzirwa kwazvo, ini ndaifanira kuitora.
Kana iri iyo iPhone 5 inononoka zvishoma asi shanduko hainyatso kuoneka, ndakaisiya paIos 9.
Carlos Vazquez muchengeti wemufananidzo akadaro
Mhoroi, ndine rimwe dambudziko uye handizive kana kuri nekuda kweyekuvandudza, ndinoedza kumisikidza dhata kune chero chishandiso uye rinoita asi ini ndinobuda mumenyu kuti ndigone kumisikidza kuti igare isinga shande, mumwe munhu angandibatsira ini ndakapererwa zvishoma!
Pindura Carlos Vazquez
Ndakavandudza iPad 2 uye ikozvino safari iri kuramba ichirovera. Ini ndichaedza kudzoreredza michina
Pindura kuna Alfred
Pane yangu Iphone 4S ine IOS 9 kupenya kuri kunze kwekudzora, kunoderedza uye kunowedzera chete.
yemubatanidzwa comander akadaro
Mhinduro iri nyore. iOs is a super limited system, nekuda kweiyo programming uye Hardware limited uye yakaderera mhando yezvinhu zvei iphone (isu tatoziva nezvekutuka kwayo kwakarongwa kusakwana kweavo vakabhadhara mari yakadarikidza), mashandiro anoita kuti foni ishande inofanirwa ive yakanyanya kuganhurirwa, nekudaro haigone kuita zvinhu zvakapusa izvo zvine Android kwemazana emakore, senge kuendesa chero rudzi rwefaira uye pasina kudikanwa kweTunes, uchishandisa iyo terminal seyakawanda yekuchengetedza unit, usb otg, kuendesa mafaira kuburikidza neBluetooth kune chero chinhu , kana kungoti iyo whats app inozvitumira iyo kana iyo chiratidzo yarasika uye yapora !!!!!!! Hazvina musoro haha. Zvakanaka, mune izvi iOs ivo vaedza kuita zvakawanda! Fungidzira, yakawanda-tasking pane yakaderera-kumagumo foni, ine gig yegondohwe uye inononoka processor uye chete 2 macores. Zvakanaka, lag iri pano yezvekuti zviitike, kudzamara Apple yasarudza kugadzira mafoni emhando yepamusoro uye kumisa kushandisa zvakachipa zvinhu, izvo zvisingakotame nekungozviisa muhomwe yebhurugwa.
Pindura kumubatanidzwa comander
Alberto carmona akadaro
Mhoro zvakanaka kubva pane zvandakaona ndakaisa ios9 mune angu maviri maidziyo; iphone 2s uye iphone 5plus, ini ndinoenda nezvikamu:
- Iphone 6 plus: Ini ndinoona lags / jerks kana uchidhinda bhatani repamba kuti udzokere kumba skrini, dzimwe nguva kufona kana maWhatsapp haanzwika kwandiri, sekunge vaive vakanyarara, bhatiri nyaya nekuti inogara zvakafanana.
- Iphone 5s: kune mashoma lags kana majeji pane ari mu6 plus, izvo zvandisinganzwisise nekuti iyo 6 yekuwedzera inofanirwa kuve neprosesa iri nani, zvinoitika nenzira imwechete iyo dzimwe nguva mafoni anouya uye WhatsApp isingaridze, iyo bhatiri rinogara zvishoma zvishoma.
Chandisingafungire ndechekuti neimwe vhezheni nyowani yeios yatinomisikidza ivo vanotitaurira kana
kuraira kuti tibvise sarudzo dzefoni kuitira kuti ifambe zvirinani uye iite zvirinani uye isarerekeka zvishoma, iine sezvo ini ndiine 6plus modhi yazvino, ndezvekuti kwete, nekuti kana zvisiri izvo nei ndichida mabasa akawanda kana mhedzisiro kana vachizondiudza gare gare kudzima iyo
hafu, yakaipa kwazvo Apple, ios 9.1 yatove, kuti zvese izvi zvikanganiso zvinogadziriswa.
Pindura Alberto Carmona
Yaisafanirwa kudzora chero chinhu! "Ingomufadza pane zvishoma", sekunge kururamisa Apple ...
Inofanira kuvandudza ruzivo rwevashandisi. Izvi zvagara zviri izvo munyika "yekunze kweApple".
Ah zvakanaka. Munguva pfupi inotevera uchazozviona.
Kwaziso kubva kune aimbove mushandisi.
Juan Andrés García Gamboa akadaro
Ndine iPhone 5C, kutaura chokwadi zvese zvakanaka neIOS 9 kunze kweSpotlight neWhatsApp, kunyanya pandinonyora ndoenda kumutsara unotevera ndinosara ndisingafambe kusvika masekondi mashoma gare gare, asi zvinotora nguva yakareba, sekunge pandinotumira meseji kuburikidza newhatsapp, zvinotora nguva kuendesa nekuti inoramba yakanamatira uye hapana chandingaite pachiratidziri. Pane nzira yekugadzirisa izvozvo? Chero ani zvake anonzwa zvakafanana? Chii chandingaite, nekuti lag iyi haina kugadzikana.
Pindura Juan Andrés García Gamboa
Hapana. Zvakanakisa kudzima maapplication anokonzera matambudziko.
Uye yakadzimwa kuitira kuti igare kwenguva refu.
Yakashanda pane yangu iPhone 6!
Mubvunzo: Iko hakuna nzira yekudzokera kune yekare multitasking windows inoratidzira?
Izvo hazvishande pane yangu iPhone, chero mamwe mazano?
Ndine iphone 6 uye mushure mekuvandudza lag yakaonekwa! Ndakaedza mhinduro ikashanda, ndinovimba inogara! Ndatenda
Maitiro ekuisa mavhidhiyo eHD nemifananidzo kuFacebook
IOS 9 Yakarasika Mamiriro anochinja otomatiki pane yakaderera simba modhi